Bitta meshaalee Aadda addaa | | Tenders in Ethiopia
Building and Finishing Materials / Building Construction / Computer and Accessories / Garments and Uniforms / House Furniture / Office Furniture / Office Machines and Accessories / Spare Parts and Car Decoration Materials / Stationery / Textile
Bitta Meshaalee Aadda Addaa
Fiche Town Finance and Economic Development Bureau
Caalbaasii Ifaa Bittaa Meeshaalee
Godiina Shawaa Kaabaa Bul/ Magaala Fiichee bara bajeta 2013tti seekteroota Magaala keessatti argamaniif
Meeshaalee Uffata Seeraa/ lot1/,
Meeshaa Dhumaatii/ Iteeshinarii Mot2/,
Meeshaalee Dhaabbataa, Elektironiksii /lot 3,
Farniicharii biyya alaaf biyya keessaa lot 4/
Meeshaalee Ijaarsaa /lot 5/
fi Gommaawwan Konkolaataa/ lot 6/ caalbaasii ifaatiin waldorgomsiisee bituu barbaada.
Ulaagaalee Caalbaasi Bittaa Meeshaalee
Dorgomtootni kallatti hojii daldala bittaa meeshaalee isaa eenyummaa daldala seera qabeessa ta’ee fi facaatii kennaa tajaajila dhiyeessii meeshaa keessatti galma’aa taaksii dabalataa/VAT/ta’uu isaa fii ragaa footoo koppii dhiyeeffachuu qabu.
Dorgomaan kamiiyyuu uffata seeraa irratti saampilii yka akaakuu uffatichaa dhiyeessuu qaba.
Dorgomaan kamiiyyuu hayyama hojii daldalaa fi lakk.gibiraa/TIN/ gosa meeshaalee irratti dorgomuu kallattiidhaan ta’uu qaba. Taaksii dabalataa/VAT/ hanga ammaatti kan ittiin kaffalan kan ibsu ragaa dhiyeeffachuu kan danda’u.
Dorgomtootni sanada caalbaasii guyyaa beeksifni caalbaasiin kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfamee bahe irraa kaasee guyyaa hojii walitti aanaan 15 keessatti waaree dura sa’aatii 2:30 –6:30tti waaree booda 7:30 hanga 11:30tti tokkoon tokkoon sanadaatiif qarshii hin deebine 100 kaffaluudhaan WMWD/ Magaala Fiichee lakk. 1 tti dhiyaachuun sanada bitachuun ni danda’ama.
Caalbaasiin kan banamu gaafa guyyaa 16 ffaa waaree dura sa’aatii 4:30 irratti saanduqni cufamee guyyuma kana sa’aatii 5:00 irratti bakka dorgomaan jirutti ykn bakka bu’aan seera qabeessaa jirutti ni banama. guyyaan 16ffaan sanbatarraa yoo oole guyyaa hojii itti aanu sa’aatii wal-fakkaatuutti ta’a.
Dorgomtoonni fuula tokkoon tokkoon sanadaarratti chaaphaa fi maallattoon jiraachuu qaba.
Dorgomaan kamiiyyuu kabachiisa caalbaasii tokkoon tokkon sanadaatiif qarshii 10,000 maqaa Waajjira MWD/ Magaala Fiichetiin cheekii/ CPO/ baankitiin mirkana’e ykn maallaqa callaa dheedhii sanada orjinaala caalbaasichaa waliin qabsiisuun ni dandeessu.
Dorgomtootni lootii adda addaa kamiiyyuu kophaa isaa poostadhaan saamsuun orjinaalaa fi koopii dhiyeessuu qabu.
Moo’ataan caalbaasii meeshaalee moo‘ate hunda baasii ofii isaa danda’ee hanga WMWD/ Magaala Fiicheetti dhiyeessu qaba.
Waajjirri baayyina meeshaalee guutumaan gartokkeen akka dhiyeessan ajajuu ni dan da’a.
Meeshaalee haala mo’atan barbaaddameen qulqullinnisaa yoo hir’ate ykn dogorgorri yoo uummame kan itti gaafatamu moo’aticha ykn dhiyeessaa ta’a.
Dorgomtootni sanada caalbaasichaa irratti komi yoo qabaatan akkaataa labsii bittaa mootummaa bu’uureessuun komii isaanii dhiyeeffachuu ni danda’u.
Dorgomtootni sanada caalbaasii irratti gaaffii ykn yaada yoo qabaatan sanada osoo hin galchin guyyaa 5/shan/ dura gaafachuu ni danda’u.
· Waajjirichi caalbaasicha filannoo biraa yoo argate guutumaan guutuu ykn gar-tokkeen haquu ni danda’a. Odeeffannoo dabalataa lakk.bilbilaa 011135101 1,0911775500,0946601173 Waajjira Maallaqaaf Walta’iinsa Diinagdee Magaala Fiichee.